1 Ịhọrọngalaba aha，网络托管商，na onye na-ewuụlọ
3 Kasịmma WordPress nri博客gburugburu na插件
6 Usoro 5 dmfe iji nweta博客gn n’ala
6.2 Nzọụkwụ＃3：Mepụtaọdịnaya（na-elekwasịanya na visuals）
WP gburugburu（ụgwọ）-Esi nri，美食博客，百胜美食
WP ngwa mgbakwunye-Ntuziaka kacha mma WP，小火，菊苣，埃西
Yabụkpebiri itinye oge izu nablọọgụnri?
Ịmaara …ọtụtụblọọgụna-enweta ego 6ọnụọgụgụtaabụndịmmadụdịkagị，wuru ya，n’enweghịiheọbụlamaọbụghịagụụna-adịghịagwụagwụban.
Obidịkwamụtọnaịna-ewerenzọụkwụmbụgịtaa。 Ya mere，kaanyịbido.
Ịhọrọngalaba aha，网络托管商，na onye na-ewuụlọ
Akpa abia aha ngalaba。 Naanị，aha ngalabagịbụadreesịweebụgị.
ụtụtụmmadụna-akparịmaka iji’isi okwu’na ngalaba aha nke mere na Googlegosipụtaraya n’elu maka mgbendịọrụchọwaraokwundịahụ.
Otúọdị，ọnụnọnke isiokwuahụna ngalaba ahaagaghịziemetụta引擎引擎算法.
Yabụ，imebụrụnaịchọrọimepe博客banyere nri paleo，ịgaghịakpọ博客gịpalofood.com。 Ọbụlagodi，我和其他人SEO布朗尼.
Nkeahụkwuru，ọbụkpam kpam n’akagịịdịaha ngalabaịhọọrọ.
Ọzọkwa，gaga-amatarịrịnaọdịmmaịmaliteblọọgụnri ma jiri ahagịdịka aha ngalaba。 Yabụ，b br r Jane Jane和dmmmakpọ博客nri JaneDeo.comgị.
N’ụzahahụ，ga-enwenkwụghachidịelun’ikpeazụn’ihi na mgbe ogeụfọdụgasịrị，ịga-aghọonye ama amagịna ama。可能会成为ikebbbụrụonimpencer.
Otu nnukwu ihe at nkeụdịakaahụbụnkwadondịahịa，MkpụrụEgwu。 ikena-akpọya博客, "customersupportadvice.com".
Mgbeịhọọrọngalaba aha，i iji ngalaba aha na-edeba ahaọrụdịka Namecheap ede ya。 Maọbụ，nwekwara ikeịzụtaya site n’akandịna-ewetagịmaọbụrụna ha enye otu。 （Ọtụtụn’ime ha na-enyefe onwe ha n’efu naatụmatụkwaafọ。）
Ozugboịnweta aha ngalabaahụ，ịkwesịrịchọtaonye anabatara WordPress ime ka ebenrụọrụweebụgịdịndụ.
在ọụaba abaọọọọọọọọọọ。 Ihdịiche n’etitiakaụntụnnabata WordPressnknktịnaakaụntụBochum jisiri ikebụnan’ikpeazụ，ndịna-ewetandịọbịana-elekọtanchekwasaịtịịma na-eme kasaịtịgị.
N’okpuru，ana m akwadondịọrụnnabatandịahịaa。 Njikọniilena-arụtụaka nantụleJerry.
SiteGround-Nhọrọnkentanetịkacha mma na nkwado ezigbondịahịa.
Ndịna-edebeweebụnwere ikeịdịọnụaladịka$ 3.99 /ọnwanaọnụahịadịka $ 29 /ọnwa。 Enwere onwegịmalite na ebenrụọrụweebụgịnwereatụmatụntinye na ntinye ma mechaakwụọgwọka okporoụzọgịna-eto.
网站naụlọọrụweebụna aha ngalabaahụ，iheọzọga-achọịhọrọbụusoro ikpo okwu maka iwulisaịtịgị-maọbụonye na-arụọrụnasaịtịahụ.
Rịbaama：Nhaziụlọọrkenge oge a（ntụgharị，Wix AnkaNrụpụtaIhe Wix）ngalabanchịkọtananchịkwan’elu ikpo okwuọnụ.
N’ime nkuzi a，anyịna-abanye na WordPress CMS.
ọzchakachasịfe fe feịịịịa on URL.
在WordPress.com上进行网络营销。 O doro anya，ejiri akara mara WordPress尼罗河.
ON GAGH toachọ…maọbụnaịmaghịbanyereịmebiịntanetị
不要chọghịịma banyere njimara nkegị
您正在使用mmachidịiche ichedịkaenweghịnkwado maka插件na ndzọzọ
不要在bas bas basị（ịụodi odiụụpor por por porịlu））））
ụbụrụna nkeahụabụghị，gaa makawebsaịtịWordPress kwadoro。 Ime nke a ga-aka irite uru nkeọtụtụpuku isiokwu WordPress na插件
（ma n’efu makwụọụgwọ）ma wuo ebenrụọrụweebụwe nwere ikeịgbaọsọnaọnụọgụgụ.
Na nkeahụ，ihendekọniiledịna ya.
Dịlaugbuịmaliteịmalite博客gị。 Maka nke a，ịga-achọisiokwu na插件ole na ole.
Kasịmma WordPress nri博客gburugburu na插件
恩戈西 & 恩克瓦
Koukibụmakagịmaọbụrụnaịhụrụebeọchan’anya machọọntinye zen nantakịrị。 Kouki na-eji nnukwu字体na-egosipụtaihe ngosidịnnọọmma。 Club ya na otu n’ime ntinye ihentanetịndịana-emepụta（atụrụaro n’okpuru ebe a），ịga-adịkwanjikere ijindụgịna-ebindụ.
恩戈西 & ọwa/ụnụ：$ 129
Cook’d Probụisiokwu nri WordPress mara mma nkedịoke egwu nangwaọrụniile。 Dịkaịpụrụịhụna nseta ihuenyodịn’elu，ọna-elekwasịanya na照片.
enezwakwa是na-ewu ya nantọalaJenesis，在maara naọna-agbaọsọnaọkụ中。 Ihe mkpuchi nke usoro ana-abịana ngalabadịiche iche makantọalaSEO yana makantọalandịọzọ.
Rịbaama na isiokwu Jenesis na-ebunaanịatụmatụịchọrọ;哈阿迪吉－恩韦－奥图图－卡里亚纳·惠斯特。 Nkeahụkwuru，hana-arụọrụha nkeọma.
KwaỤbọchịbụisiokwuọzkenke Jenesis ga ga-elele。网站nankwụsiike naọsọnkentọalanke Jenesis na-eji ya ma na-ejiọmarịchaụlọmara mmadịegwu
恩戈西 & nkwa / $ 125
Ngwaahịaadịelubụngwa ngwa otu n’ime echiche isiokwu博客Nri WordPress。 here naababa na ndekwaaụzọesi eme nri ma na-enyekwagịohereịnabatantinye nri sitere n’akandịna-agụgị。 Nkwado ntinye nrindụabụnke a na-eji厨师做饭-ngwa mgbakwunye $39。Ntuziaka nandepụtanke usoro nri dịna isiokwu ana-abịana igbe nlele，siotúwna-enyerendịna-ijụide n’aka na haagaghịechefu maọbụiheọbụladịmkpa.
网站n’iji nkeọbụlan’ime isiokwundịdịn’elu，ga-adịnjikere na博客ọrụ.
Mana-Agbanyeghịetu esiechepụtaisiokwu nwe ikeịbụmaka akwu，ọgaghịekwe omume itinyeọrụniile onye nweweebụsaịtịnwere ikeịchọ.
Dịkaọmụmaatụ，makablọgụnrigị，ịrechịpụtana nachchrrọụzọkachasịmma makachasịmma ijigosipụtanrigị，maọbụnaịchọrọime kanféka ka ka fe interest foto foto Ọrụdịkandịaapụtaghịna isiokwuahụ.
Lee a ole na ole mma-na-nwere WordPress nri博客插件naga-atụkwasịrịurugịblog：
Ntụziakasitere na Simmerbụngwa mgbakwunyeọzọna-enyegịohere ikwuputa Ezintụziakanablọọgụgị。 -na-enyentọaladịmfe ijidepụtaihendịdịna ya，nye ntuziaka esi nri na ozindịọzọ。 Ntụakaịgbakwunye na iji ngwa mgbakwunye abụihe ejiachọinjin maka enyim n’ihi na ngwa mgbakwunye a na-ejiatụmatụnhazi nke Google iji wuoụlọọrụenyi SEO.
Esi nribụaadịchaghịWordPress uzommeputa ngwa mgbakwunyena-abịana a drag-na-dobe uzommeputa onye na-ewuụlọ。 10 na-abakwa na nhazi 10dịnjikere.
Na Ejicha ya，onyeọbụlan’imendịna-agụgịna-enwetaakwụkwọprofaịlụ。 Nri yana-abịajuputara na oge，nnukwu ihe nyocha na ior oriri na-edozi ihe gbasara Ezintụziaka/ nri。 aka 39ụile ile–，39 $ $ 39.
Na mgbakwunye na插件和插件，包括ole na ole m na-akwadosaịtịbụlainwe插件。 heọụụụha ha，ke ke ke ke ke ke ke ke ke，ke ke，，，ke ke ke ke e ma e e。 Leleendepụtazuru ezu ebe a.
Ọdm mma-yabụnke ana-elekọta物流。 ‘V nwere ngalaba，nnabata，na isiokwu…yanaụfọdụ插件nhọrọ.
N’oge a，ịdịlanjikereịmaliteịrụọrụnablọgụgịweechọpụtaisiokwu ga ga-ekpuchi，ugboro ole gaga-ebipụta，nke usorontanetịmgbasa ozi na aba ga-anwale都是。 Iji mee ka ihedịmfe，gbalịasoro usoro ntinye 5ahụn’okpuru.
Usoro 5 dmfe iji nweta博客gn n’ala
Chọrọinweta nhazi博客gịnri ozugbo网站na mbido n’ihi na ihe owuwusaịtị（karịchaa，isi nriụzọya）ga-ekpebi etuahụịịịigịbeọrụnkendịọrụgịga-esidị.
Nke adịmkpa maka博客nri makaọdịnayanke博客nike，rigbatịọtụtụnri，nri，nri nandịọzọ。 Yabụ，ọbọrụna inwetaranchịkọtanhọrọnkeweebụsaịtịahụn’aka nri，ịga-amalite mmalitedịmma.
E wezuga ya，iche maka ihesaịtịgịmaọbụnaanịimeatụmatụchịkọtasaịtịgịga-enyegịoge ijitụgharịauche iheọdịnayagịga-adịna ihedịiche iche ga ga-en.
Lee Otu iheatụiji nyegịisi mmalite.
凯特（Kate）博客作者Cookie和凯特（Nate）成为祖鲁（Ezu）祖鲁。 Naanịleleeotúe siakọwaihendịa na-eme naotúọfụmana-adaba adaba：
Yabụbụrụnaịga-enwesaịtịnwere nnukwuọdịnaya，ịwega maka menudịkanke a.
屋宇面 – Dịkao kwesiri，tupuịmaliteblọọgụgị，ịkwesịrịinweọhụụopekata mpe nke 20. Kedu nkepụtara，ọbụrụnaibipụtaakwụkwọugboroabụọn’izu和ga-ekpuchigịkarba.
Nzọụkwụ＃3：Mepụtaọdịnaya（na-elekwasịanya na visuals）
Akụkụakụkụnkeọdịnayagịga-abịaragị。 Ekelegịnka na niche。 Otúọdị，ederede a ga-eme kaọkarankeọdịnayagị
n’ihi na mgbe niile，oleeotúezigbo ezigbo uzommeputa ga-ele anyana-enweghịụfọdụyummy oyiyi …
O di nwute，照片作者是尼罗河。 Mana nkeahụapụtaghịnaịnweghịikeịmụ.
Bụrụihe oyiyi nkeachịchaagwakọtaramaọbụihendịna-emepụtaihe，ihe oyiyina-abụakụkụburu ibu nke otu博客nri。 Nkepụtaranaịgaghịemeli图片。 Ma obidịọtọ，ike ikeụụụsite site site NA siteENye N siteị
N’okpuru ihe nkiri：食品摄影（酸奶冻糕）
Otu esi eweputa照片在ukwuu网站上的存在
hebụrụnawegnweghịogeịmụọtụtụihe，ọbụlagodibido网站na ngwa ngwa arụrụarụna nke ruru unyi：
Debe mpempeakwụkwọmaọbụefere na counter
Gbaambọhụna enwere ezigboọkụmgbeịgbaa.
Na mgbakwunye na ihe oyiyi nri，gbalịaimeụfọdụihe okikedịkanchịkọtaihe oyiyi nantụziakana-ejingwaọrụn’efu dika Canva或Ebube azu.
Ọzọkwa，ghọtanaọna-ewe oge iji nweta ego网站nablọọgụ-yabụmee ihe niileịna-eme kaịna-enwe ndidi。 Gha abanye ebe ahu ma oburu na inwa izu ike.
Yabụnkeahụbụmakaịmalite博客nri na WordPress。 gobgorụnalee nwere ego itinye ego nammụta，lelee mmemmedịkaFood Blogger Pro。 Maọbụ，mee ihekachasịmma ma soro mamụọblọọgụnrindịọzọweemụtaihe na ha.
IheKachasịMma Maka Blog NRIGị!
Ntuziaka编辑-E buụzọbipụtaraisiokwu a nasaịtịanynwanyịBuildThis.io。 Anyịemelitelaọdịnayaahụtupuanyịebidoghachiakwụkwọebe a.
Contents0.1 navigasie0.2 Ndepụta Ngwaọrụ 1 Ịhọrọ ngalaba aha, webhost, na onye na-ewu ụlọ2 Word
Contents0.1 նավարկություն0.2 Ndepụta Ngwaọrụ 1 Họrọ ngalaba aha, վեբ հաղորդավար, na onye na-ewu ụlọ2
Contents0.1 lundrim0.2 Ndepụta Ngwaọrụ 1 Ịhọrọ ngalaba aha, web host, na onye na-ewu ụlọ2
Contents0.1 navigeerimine0.2 Ndepụta Ngwaọrụ 1 Ịhọrọ ngalaba aha, veebimajutaja, na onye na-ewu ụlọ2 Veebimajutus
Libaka Tse Hloahloa tsa Tant Motho tseo que Kileng ka li Bona (el Kamoo U ka Etsang Kateng)